Banyere Anyị - Xuzhou Tianqi Mining Technology Co., Ltd.
Mmadụ Bịa ka Minlọ Ngwuputa
Kedu igbe igbe?
Kemgbe October 31, 2008, ID Satoshi Nakamoto ejirila akwụkwọ nwere peeji itoolu mepụta otu puku ijeri yuan nke ikuku site na ikuku. Kemgbe ahụ, na netwọkụ a na-achọghị ka a mata aha ya, enwere ụgwọ ọrụ nhazi maka onye ọ bụla na-arụ ọrụ azịza ya dịka usoro nkwenye PoW: Ihe akaebe nke ọrụ na ọ bụ onye izizi iji mezue ngọngọ ngwugwu ahụ. Gwọ ọrụ bụ bitcoins 12.5 ugbu a, ma ọ bụ ihe dị ka $ 85,000. Usoro a maara dị ka "Ngwuputa".
Ọdịdị nke akaebe nke ọrụ na-agwụ ike. Ike ike nke nghazi ngwaọrụ gị bụ, ohere dị elu nke ịgbakọ azịza ya. Na mbido, ndị na-egwuputa ihe jiri CPU na GPUs iche m iche. Site na mmụba nke ike mgbakọ, ebe a na-egwupụta ọdọ mmiri na-achịkọta ọtụtụ ike ndị mmadụ apụta. Ebe a na-egwupụta egwu mmiri nwere ohere ka ukwuu nke ịgbakọ azịza ya na inweta ụgwọ ọrụ, nke mere na onye ọ bụla na-enweta ụgwọ ọrụ yana òkè ya mụbara. N'otu oge ahụ, nsogbu ahụ pụtakwara, ： ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-egwuputa ihe na-agbakọkọ ọnụ, nke na-emepụta ma na-eme mkpọtụ na ọkụ, nnukwu ike oriri. Enwere nsogbu dị mkpa siri ike ibugharị, n'ihi na ndị na-egwupụta akụ na akụrụngwa dị ọtụtụ. Ya mere amụrụ igbe m.
Ebumnuche anyị bụ ịmepụta usoro ego na-emeghe maka ụwa.
Nke a na-etinye ihe eji egwu mmiri na-enye ndị na-egwuputa ihe ihe ngwọta dị mma karịa nchịkọta ụlọ nkwakọba ihe. Akụkụ buru ibu nke ego nke nsị cryptocurrency na-abịa site na oriri eletrik na ụgwọ ụlọ nkwakọba ihe. Enwere ike ibuga arịa ndị na-ebubata ngwa ngwa na gwongworo ma bufee ha ebe ọ bụla ịchọrọ iji ike dị ala. Ejighi ya tie saịtị ahụ, ma nwee mmegharị siri ike, ma ọ dị ọnụ ahịa yana recyclable.
Tianqi Mining agwụla akụkọ ihe mere eme gara aga nke ịme igbe igbe na nkwụnye ihe. Ọ na-eji nchara nchara ọhụrụ mepụta igbe ndị na-egwupụta akụ, na-eme ka ha nwekwuo ume na ịdị arọ. Tụkwasị na nke a, anyị wuru igbe mkpuchi cryptocurrency nke nwere ike ịnabata ndị ọrụ ASIC na GPU iji gboo mkpa nke ndị ahịa ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ igbe ụkwụ 40, igbe igbe ahaziri iche pụrụ iche, ma ọ bụ ọtụtụ ihe dị mkpa pụrụ iche, na Tianqi, a ga-egbo mkpa ọ bụla. N’afọ 2020, igbe igbe ọhụụ anyị nwere ike ịwepu mmanụ na igbe ebe a na-egwu mmanụ emeela ka ụgbọ mmiri cus ma tinye ya n'ọrụ.ichi.
"Anyị bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ kachasị mkpa nke Bit-coin. E kewara azụmahịa ya ụzọ abụọ: ducingmịpụta nkọwa dị iche iche nke igbe ndị na-egwupụta mkpanaka, na-eweta akụrụngwa nke aka abụọ ala karịa ahịa ahịa"
Ndewonu! nke a bụ Tianqi Mining. Anyị bụ ndị a ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepụta na ọrịre nke cryptocurrency mobile Ngwuputa igbe na-eji Ngwuputa igwe. Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ihe dị ka mita 3,000, na -emepụta ma na-ebupụ nkọwa dị iche iche nke igbe ndị na-agagharị agagharị nke ndị ahịa chọrọ na Xuzhou China. Anyị nwere ike hazie igbe ndị na-egwupụta akụ dịka ọchịchọ ndị ahịa si achọ. N’ezie, anyị nwekwara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke igbe eji egwu ngwanrọ a na-eji agagharị na ahịa ndị China na ngwaahịa. Mmadụ Bịa na ileta anyị factory! Anyị na-enyekwa ndị ọrụ ntanetị na ndozi ọrụ dịka mkpa gị. Na nkenke, Tianqi ga-enye gị usoro zuru ezu maka azịza maka ihe niile ịchọrọ na ngwuputa cryptocurrency,
Ihe onwunwe anyị nwere na-adọta ọtụtụ ndị nwe ala ndị China na nnukwu ndị na-egwupụta akụ, yabụ na anyị nwere ike ịchọta akụ m nke abụọ na ọnụahịa dị ala. Yabụ, anyị nwere uru zuru oke iji chọta igwe akụrụngwa ịchọrọ na ahịa igwe. Anyị na-ekwe nkwa na nsọpụrụ nke ụlọ ọrụ anyị: a na-anwale igwe ọ bụla anyị na-egwuputa Bit-mkpụrụ ego nke ndị otu anyị nwere, anyị nwere ike hụ na arụmọrụ nkịtị nke igwe ọ bụla na-egwupụta igwe.
antbox akpa, antminer akpa, btc akpa, mkpuchi crypto asic, eji akụrụngwa akụrụngwa crypto, obere akpa,